भुटानसँग किन हार्यो नेपाल ? – Khel Dainik
घरमै जारी साफ यु–१८ च्याम्पियनसिपमा लगातार दुई पटकको विजेता तथा साविक विजेता नेपाल समूह चरणमा भुटानसँग हारेपछि त्यसले नेपाली फुटबलमा ठूलै तरंगा पैदा गर्यो । त्यो हार कति घातक थियो भने, नेपाला प्रतियोगितामा पुछारमा रहेर समूह चरणबाटै बाहिरियो । सोही समूहको भुटान भने शिर्ष स्थानमा रहेर सेमिफाइनलमा समेत पुग्न सफल भयो ।
चर्चा गर्नुपर्ने कुरा त यहाँ भुटानले यसै खेल जितेको हैन । त्यसमा भुटान फूटबल संघको धेरै मेहनत र इमान्दारिता छ । केही बर्ष अघी सम्म नेपालसँग ठुलो गोलअन्तरले पराजित हुने भुटानले लगालग चार ठाउँमा फुटबल विकासको मेरुदण्ड मानिने फूटबल एकेडेमी स्थापना गर्यो । आफुसँग भएका प्रशिक्षकहरुलाई बिदेसमा ट्रैनिङ दिन पठायो र फर्केपछी एकेडेमीमा आकर्षक पारिश्रमिक सहित जागिर दियो ।
त्यसपछी भुटान फूटबल संघले राम्रो खेलमैदानको लागि लगानी पनि गर्यो । बिभिन्न ठाउँमा टर्फ मैदान बनायो । त्यति मात्र नभएर धेरै भन्दा धेरै खेलाडीहरुलाई खेल्ने वातावरण बनायो । ग्रासरुट्स फूटबलमा लगानी मात्र होइन, संघले उक्त लगानी ठीक तरिकाले भयो कि भएन भनेर निरीक्षण पनि गर्यो ।
फलस्वरुप, आज भुटानका खेलाडीलाई नभएको सुबिधा केही छैन । अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न जादा दिनको १०० अमेरिकी डलर दिन्छ, त्यो पनि सानो टिमको खेलाडीलाई । अभ्यासपछि केरा, ब्रेड मात्रै होइन, पोसिलो, भुटानको अर्गानिक खाना खुवाइन्छ, एकेडेमीमा खेलाडीलाई राम्रो रेखदेखमा राखिन्छ । न्युट्रिसनिस्टको रेखदेखमा खानेकुरा दिने गरिन्छ ।
तर हाम्रो नेपाली फुटबलमा खेलाडीहरुलाई यो अवस्था र सुविधा विरलै छ । बरु छैन भन्दा हुन्छ । हो, हाम्रोमा यस्तो छँदै छैन । उनिहरुले फिुटबलका लागि लामो योजना बनाए । बिगतमा नेपालसँग ४–०, ५–० ले पराजित हुँदा शायद उनिहरुले आजको दिन देखेको हुनुपर्छ । तेसैले भुटान फूटबल संघलाई धेरै धेरै बधाई छ । आसा गरौ, हामी सुध्रिन्छौ नत्र हामी त यस्तै त हो नि ब्रो !
(हाम्रो भातृ पेज गोलनेपालबाट सांभार)
← मकवानपुर जिल्ला लिग : हटिया स्पोर्टस् र विजय यूथ क्वाटरफाइनल साफ यु १८ : भारतको जित, सेमिफाइनल समिकरण पूरा →
नुवाकोटमा उपमेयर कप शुरु आश्विन ८, २०७६
दोस्रो खेलमा पनि युगाण्डासँग हार्यो नेपाल आश्विन ८, २०७६
विश्वकर्मा कप फुटसल शनिबार आश्विन ८, २०७६
अमेरिकामा लक्ष्मणलाई पदक आश्विन ८, २०७६
नेपाल ब्यायाम मन्दिरको ध्यानाकर्षण आश्विन ८, २०७६
क्लबलाई व्हीलचेयर सहयोग आश्विन ८, २०७६